Aasxaa fi Alaabaa Kallacha Walabummaa Oromiyaa (KWO/OIF) labsuu. - Welcome to bilisummaa
Aasxaa fi Alaabaa Kallacha Walabummaa Oromiyaa (KWO/OIF) labsuu.
bilisummaa August 30, 2015	Leave a comment
Aasxaa Kallacha Walbummaa Oromiyaa (KWO/OIF)
Alaabaa Kallacha Walabummaa Oromiyaa (KWO/OIF
Hagayya 2, 2015
Ummanni Oromoo gabrrummaa jalatti erga kufee kaasee gaaf tokkollee tole
jedhee gabroomfattoota Habashaa jalatti bulee hinbeeku. Ummanni keenna erga
gabroomffattoonni balbala isaa gahanii kaasee humna qabu hundaan lola ufirraa
ittisuu (War of resistance) dabalatee gootummaadhaan diinota isaa falmaa ture.
Qabsoo Ummata Oromoo haalli seenaa tokko tokko jidduu seenanii yoo bifa biraa
qabsiisanillee (lola xaaliyaanii, sochii Mangistuu Nuway, warraaqsa bara 1974 fi
dhufaatii wayyaanee kan bara 1991) qabsoon teenna waggoota dheeraa kanniin
keessatti kufaa ka’aa yoona geettee jirti. Qabsoon Saba keennaa tun, akka
ammayaatti kan eegalamte bara 1973 hundeefama Adda Bilisummaa Oromoo
(ABO) tiin akka ta’e namiifuu ifa galaadha. Qabsoon bara dheeraaf hoggansa
dhaaba siyaasaa dhabdee kufaa, ka’aa asgeette yeroo jalqabaatif ilmaan Oromoo
gootummaadhaan ka’anii dhimma Saba ufiitiif akkasumas dhimma biyya ufiitif
(Oromiyaaf) falmmudhaaf sagantaa siyaasaa qopheeffatanii waanjoo gabrrummaa ufirraa
darbuuudhaaf sochiin taasisan, sochii seenaa qabeesssa jennee amanna. Uummanni Oromoo haqa isaa barbaadachuudhaaf dhaaba ufiitin hogganamee deemudhaaf fedhiin inni qabu hedduu kan nama dinqisiisu fi ar’allee kan mul’atuudha.
Haa ta’u malee, qabsoon bilisummaa tan ABO dhaan hogganamtu baroota 1973
hanga 1991 keessatti bu’aa adda addaa kan ifaa ta’ee fi kan ifa hinta’in
(tangible & intangible results) haa buusu malee sochiin kun bu’aa lubbuu qabu
galmeesisuu osoo hindandayin wayyaneen mootummaa jiddu galeessaa
tooyachuudhaan sirna gabroomfataa dulloome abaaraa sirna gabrroomfataa isa
caalu bakka buusudhaan ummatarratti feete. ABO fi dhabbotiin Oromoo adda ddaa
jalqabarratti motummaa cehumsaa keessatti qooda yoo qabaatanillee waggaa tokko
keessatti dhiibamanii akka mootumicha keessaa bahan taasifame.
Qabsoon Oromoo bara 1992 irraa kaasee hanga ammaatti bifa hoggansi
dhaabolee biyya keessaa bahee biyyoota alaa (diaspora) kessatti hundooftee kan
deemu ta’e. Har’a qabsoon tun waggoota afurtama booda gatantarttee gara kufaatii
deemaa jirti. Yeroo diinni keennaa gama hundaan ukkamsaa isaa cimsee itti
deemaa jiru kana keessatti qabson teenna bacancara akkanaa keessa seenun waan
dhala Oromoo hunda gaddisiiseedha. Kanaaf, sochii fi qabsoo ABO jijjiiramaa
keessatti adeemsifamaa turee fi sochiiwwan qaamoleen adda addaa yeroo dheeraf
karaa adda adddaatin taasisaa turan walitti qindeesudhaan Jilli Qabsaayotaa ABO
yeroo isaa eeggatee adeemsifame kana iratti rakkoolee qabsoo bilisummaa
Ummata Oromoo qunnaman kana dhabamsiisudhaaf dirqama jiijiiramni hundee
akka taasifamu waliif galamee jira.
Haaluma kanaan nuti qabsaayonni falmii bilisummaa Saba Oromooti fi
Walabummaa Oromoyaatif dhaabanne baati Adolessaa 2015 guyyaa 20 iraa
kaasee biyyota adunyaa adda addaa keesatti teessuma/kora adeemsifachuudhaan
akkasumas kora isa guyyaa dhumaa Magaalaa Minneapolis, MN (USA) keessati
Adoolessa 30 fi 31 bara 2015 adeemsifannen yaa’iwwan keenna hunddayyuu
miliidhaan xumuranneerra. Guduunfaa koroota keennas ilaalchisee waan irra
geenne ibsa ijjannoo kanati aanu baafanneerrra:
Haala fi sadarkaan qabsoon Walbummaa Oromiyaa irra geette xiinxallaa
gadi fagoo fudhachuudhaan, qabsoo tana bacancaraa fi gatantara keessaa
baasudhaaf dhaaba haarawa qabsoo tana hafuuraa fi yaada akkasumas sochii
haarawaan finiinsu uumun waan barbaachisaa ta’ee argameef dhaaba Kllacha
Walabummaa Oromiyaa (KWO) jedhamu hundeesineerra.
Xiyyefannaan kallacha Walabummaa Oromiyaa (KWO) gabrrummaa bara
dheeraaf Uummata Oromoo irra ture araarama tokkoon malee irratti
qabsaayudhaan Saba keenna bilisummaa isaa, biyya teenna Oromiyyaammo
Walabummaa isii mirkaneesudha.
Haala kanaan sirnni gabrromfataan Uummata keennaa fi Sabootaa fi
Sabllammota adda addaa waada kijibaati fi heera gowwomsaa gatii waraqaa
seerichi iratti barreefamee hin geenne qabuun Uummattota ukkaamsuu
dhisee, mirgoonni diimokraasii, mirgoonni ilmma namaa, mirgoonni haqaa
akksumas mirgi hiree murteefannaa Saboota hundaa haal duree tokko malee
akka kabajaman jabeesinee waamicha dabarsina.
Biyya Impaayera Itoopia keessatti falamitonni dimokrasi, mirga Sabootaa fi
mirga ilma namaa manneen hidhaa jiddu galaa, maanneen hidhaa poolisi
biyya guutuu keessati, manneen hidhaa naannolee, kaampiwwan waraanaa,
kaampiwwani fi jiddu galeesota leenjii polisootaa fi waraanaa keessatti
namoonni kuma dhibbaatamatti lakkaawaman murtii malee fi murtii
dharaatin hidhamanii tumaman, torcharii seerri addunyaa dhoorgen haala
suukkanneessaa ta’een balaan kana hinjedhamnne irratti raawwatamaa jira.
Kanaafuu, hidhamttonni kun haal duree tokkoon malee akka gadi
lakkifaman waamicha goona.
KWOn shorarkeesummaa bifa kamiinu dhufu hadheefatee balaalleffata.
Waanjoo gabrrummaa uummata keenna irraa fonqolchuudhaf qbsoo
siyaasaa fi hidhannoo ni fininsa.
“Seerri shorarkeesummaa” Motummaan wayyanee baafatee biyya ittiin
unkuraa jiru, nagaya uummataa eeguf osoo hin taane taa’ita isaa eegsisuuf
kan tolfameedha. Seerri sun seera labsii yeeroo hatattamaati (Marshall law)
malee seera namoota dhunfaa, garee adda addaa fi Sabootaa fi
Sabllammoota eeguf, bu’aa fi mirgoota isaanii eeguf bayee miti. Kanaaf,
seerri ukkaamsaan kun haal duree tokko malee hatattamaan akka diigamu
mootummaan adunyaa dhiibbaa akka godhu waamicha dabarsina.
Heerri Motummaa wayyaanee gatii waraqaa iratti barrefamee hin gayu.
Heerri kun mataa isii wayaaneedhaan yeroo dhibba irra dedebi’amee
capheera. Heera hujiirra ooluu hindandeenne kan sobaa tayeera. Kanaaf,
heerri kun diiggamee uummattonni karaa bilisa ta’ee fi addunyaan marti
arguun dhiibbaa tokkoon malee hiree isaanii ufin akka murteefatan akka
taasifamu waamicha goona.
Ummanni Oromoo, ilmaani fi dhalli Oromoo hundi bakka jirtanitti
tokkummadhaan mirga keesannif dhabaadhaa, abdii kutannaa keessaa bahaa,
mirga uumamaa keessaniif qabsotti seennaa jenna.
Biyyi Oromiyaa kan Oromoti. Tuffatamaa fi ukkaamsaa biyya teennarratti
fe’ame kana cacabsinee biyya teennarratti dimokraasii dhugaa, haqaa fi
dhugaan uumamaa akka lalisan Sabni keenna bakka jirutti olola diinaatiin
osoo hin gowwomne walabummaa biyya isaatif murannoon akka qabsaayu
waamicha lammummaa dabarsina.
Kan Oromoo ta’e, kan Oromummaa fi Oromiyaa jaalatu fi qabsaayonni
Oromoo hundi sababa adda addaa tarreesuu dhiisanii, ufii walitti garagaluun
wal diiguu dhiisanii, gabrrummaa fi gabrroomfattotarratti akka xiyyeefatan
Sabootaa fi Sabllammonni mirgi isaanii ukkaamsame hundi shira
wayyaaneen xaxxuun osoo hin jilbiifanne akka mirgoota keessaniif bakka
jiratn hundatti qabsoofttan waamicha goona.
Humnoonni dimokraasii dhugaatif dhaabbattan, humnoonni mirga hiree
murteefannaa sabootaatif dhaabatan, humnoonni wal qixummaa fi
bilisummaa amantiitif dhaabatan, warri sirni haqaa kan dhugaa tayee fi bilisa
taye akka jiraatu amantan hundi, sodaa dhiisudhaan bakka jirtanitti akka
qabsooftan waamicha dabarsina.
Sirni gabromsaan wayaanee, saamicha daangaa hinqbnneen ummata keenna
hiyyoomsuu bira dabree, lafa isaarraa buqqisee alagaa irra qubsiisudhaan
Oromiyaa qubsumaan addaan diigudhaaf summii inni facaasaa jiru cimsinee
Oromiyaan Ni Walaboomti!
Injifannoo Saboota Cunqurfaman Hundaaf !
Bilisummaa, Haqa, Mirga Ilma Namaa!
Tags alaabaa KWO
Previous Matiiwwaan Hiidhaamtoota Kofalee fi Asaasaaf Degarsi Malaqaa Tasiifame.
Next Dr. Ali Birraa fi Ummata biyya isaarraa bahee ala jiraatu (Diaspora)
Shabboo Meedidya. Sabaa-himaa dhimma dantaa Oromoo irratti xiyyeefate. Waan Oromoon hundi baruu qabu, dhugaan Oromoo …